ရုံးတော်သို့ တင်ပြထားသည့် ဖုန်းမှတ်တမ်းများမှာ လုပ်ကြံ ဖန်တီးထားခြင်းများဖြစ်ဟု ဇေယျာဖြ? - Yangon Media Group
ရုံးတော်သို့ တင်ပြထားသည့် ဖုန်းမှတ်တမ်းများမှာ လုပ်ကြံ ဖန်တီးထားခြင်းများဖြစ်ဟု ဇေယျာဖြ?
ဦးကိုနီလုပ် ကြံခံရမှုတွင် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ၃ဝ၂ (၁) (ခ )/၁ဝ၉ဖြင့် စွဲချက်တင်ခံထားရသည့် ဇေယျာဖြိုးက တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းက ရုံးတော်သို့တင်ပြထားသည့် ဖုန်းမှတ်တမ်းများမှာလုပ်ကြံ ဖန်တီးထားခြင်းများသာဖြစ် ကြောင်း မီဒီယာများသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်လုပ်ကြံခံရမှုကြောင့် သေဆုံးသူ တရားလွှတ် တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လူသတ်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံထားရ သော သေနတ်သမား ကြည်လင်း (ခ)ဖိုးထူး၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူဟုစွပ် စွဲခံထားရသူ အောင်ဝင်းဇော်၊ ဇေယျာဖြိုး၊ အချုပ်လွတ် အာမခံရရှိထားသူ အောင်ဝင်းထွန်းတို့ကို မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးသို့ သြဂုတ် ၂၄ရက် နံနက်၁ဝနာရီက ရုံးချိန်းပေါင်း၇ဝ ချိန်းမြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး ဇေယျာဖြိုးအား ငါးကြိမ်မြောက် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် နေ့လယ်ပိုင်းထမင်းစားနားချိန်၌ ဇေယျာဖြိုးက မီဒီယာများအား တရားခွင်အတွင်း စစ်ဆေးခဲ့ပုံများနှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာများ အားရင်ဖွင့်ပြောကြားရာ၌ အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြောကြားသွား ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီအမှုမှာ သက်သေက အ ယောက် ၈ဝတင်သွင်းတယ်။ နည်းတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအထဲမှာ ဒီအမှုရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ MPT တို့ Ooredoo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ သက်သေလာရောက်ထွက်ဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်မှမရှိဘူး။ အခုသူတို့ရဲ့စာထဲမှာ MPT ရဲ့၊ Oore-doo ရဲ့တံဆိပ်တွေ အမှတ်အသား တွေတစ်ခုမှမပါဘူး။ ကွန်ပျူတာနဲ့ အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေ။ ဒီတော့ ဒီဘက်မှာလည်း ဒီဖုန်းနံပါတ် ဒီနေ့ဒီအချိန်ပဲ။ တစ်ခါ ဟိုဘက်မှာလည်း ဒီဖုန်းနံပါတ် ဒီအချိန်ပဲ။ ရက်စွဲ အတူတူပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုံးဝမတူဘူးဖြစ်နေ တယ်”ဟု စွပ်စွဲခံရသူ ဇေယျာဖြိုးက မီဒီယာများကို ပြောသည်။
ဆက်လက်ပြီး ”ကျွန်တော်တစ်ခုလောက် ပြောချင်တာလည်း ရှိသေးတယ်။ မီဒီယာတွေကို ဒီအ ကြောင်းတွေအပေါ်မှာ MPT က Ooredoo က သူတို့ကို ဒီဖုန်းနံပါတ် တွေကိုပေးခဲ့သလား။ ရက်စွဲစာအမှတ် ဘယ်လောက်နဲ့ပေးခဲ့သလဲ။ ဘယ်သူပေးခဲ့တာလဲ ဘယ်ဌာန ကပေးခဲ့တာလဲဆိုတာကို အမှန်တရား ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက် မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့နစ်နာသူတွေအတွက် MPT တို့ Ooredoo တို့ကို မေးပေးစေချင်တယ်။တကယ်လို့မေးခဲ့လို့ MPT တို့ Ooredoo တို့က မပေးထားဘူး။ လာ ရောက်မှန်ကန်ကြောင်းလည်း ထွက်ဆိုနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် အဓိကကျတဲ့မှတ်တမ်းတွေက အရေးကြီးတယ် လေ။ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပေါ်ပေါက်ပါတယ်ဗျာ”ဟု ဇေယျာဖြိုးက ပြောသည်။
ဇေယျာဖြိုးကို မြောက်ပိုင်းခရိုင် အထူးတရားရုံးက စစ်ဆေးနေခြင်းမှာ ငါးကြိမ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ပထမသုံးကြိမ်တွင် ¤င်း၏ရှေ့နေ ဒေါ်ပပဝင်းက အဓိကစစ်မေးခြင်းများကိုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုတစ်ပတ် ကြာသပတေး၊ သောကြာ နှစ်ရက်တွင် တရားလိုဘက်ရှေ့နေများက ပြန်လှန်စစ်မေးခြင်းပြုလုပ် နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဇေယျာဖြိုးကို စစ်ပြီးစီးပါက အောင်ဝင်းထွန်းကို စတင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားခံများ စစ်မေးမှုပြီးဆုံးပါက တရားခံပြသက်သေများကို ဆက်တိုက်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တရားရုံးမှ သိရသည်။
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရော ဘတ်စန်းအောင်က ”ဖုန်းမှတ်တမ်း တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သူတို့မလေ့လာထားဘူး။ သက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့က တရားဝင်စာနဲ့တောင်းပြီးတော့ ပေးထားတာ အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင် သူတို့ကလည်း သက်ဆိုင်ရာမှာသွား ရောက်ပြီး လျှောက်ထားပြီးတော့ ချေဖျက်လို့ရတယ်။ သူတို့မချေဖျက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါဟာ CID က ဥပဒေနဲ့ အညီတောင်းယူထားတာ။ ဥပဒေမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ တရားရုံးသက်သေ ခံဝင်ထားတယ်”ဟု သတင်းမီဒီယာများသို့ ပြောသည်။ လာမည့်တစ်ပတ်ရုံးချိန်းအား သြဂုတ်၃ဝရက်သို့ ပြန်လည်ချိန်းဆိုထားကြောင်း တရားရုံးသတင်းပြန် ကြားရေးအရာရှိ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး ဦးမောင်မောင်အေးက ပြောသည်။